SINOPED Xirfadlayaasha Mashiinnada Farmashiyaha Soosaarayaasha
Shirkaddu waxay horumarisay qalab farsamayneed oo gaar ah oo loogu talagalay mashiinnada dawooyinka.
Mashiinka Diyaarinta Qalabka Ceyriinka
Mashiinka Buuxinta Kaabsoosha Hard&softgel
Mashiinka khadka buuxinta dareeraha
Mashiinka Khadka Buuxinta budada
Mashiinka Maaskarada Wajiga
Iyada oo qalab horumarsan gaar ah processing for mashiinada dawooyinka, weheliso farsamooyinka ugu dambeeya iyo geedi socodka suuqa, aan kuna dadaalaan heerar sare.
Sino Pharmaceutical Qalabka Horumarinta (sinoped) Co, Ltd. waxaa hadda loo sameeyo R&D iyo wax soo saarka ee centrifuges in Liaoyang Pharmaceutical Makiinado Factory, warshadda ay dawladdu leedahay horeysay mashiinada wax soo saarka dawooyinka ee New Shiinaha. Waxaan leenahay waayo-aragnimo ballaaran, oo diiradda saaraya Farmashiyaha Qalabka muddo 50 sano ah, u adeega tobanaan ku dhawaad kun oo macaamiisha. Iyada oo qalabka processing sare ka go'an in ay mishiino dawooyinka, weheliso farsamooyinka ugu dambeeya iyo geedi socodka suuqa, aan kuna dadaalaan heerar sare. Iyadoo koox xirfadeed ee boqolaal dad ah, model ah maamulka kaamil ah ka dhigaysa kooxda more xirfadeed. R The hab-keenidda&D, wax soo saarka, iibka iyo adeegga ma aha oo kaliya ka dhigaysa macaamiisha ku qanacsanaa, laakiin sidoo kale iyaga ka dhigaa inay ka welwelin-free.
FLG Dheecaan Sariirta La Xidhay oo La Xidhay Khadka Wax Soo Saarka
FLG Dheecaan Sariirta La Xidhay oo La Xidhay Khadka Wax Soo SaarkaFaahfaahinta hordhaca fadlan tixraac soo socdahttps://www.alibaba.com/product-detail/China-Pharmaceutical-Fluid-bed-continuous-fluid_60586863855.html?spm=a2747.manage.0.0.149c71d27MPrngFaa'iidada GEA Pharmaceutical Vertical Fluid Fluid Sariirta qalajiyaha waxay ku nasataa ilaalinta sinnaanta iyo soo noqoshada tayada badeecada, taas oo ka tarjumaysa dheelitirnaan ku habboon oo u dhexeeya waxtarka wax soo saarka iyo tayada alaabta. Inta lagu jiro habka dareeraha, alaabtu waxay sabbaysaa hawada sare, iyada oo dusha sare ay si buuxda ula xiriirto hawada kulul, iyo walxaha sidaas darteed si siman ayaa loo cunaa oo waxay gaaraan heer ku habboon kulaylka beddelka si ay u yeeshaan waxtar sare. Lagu habeeyay nidaamka buufinta saxda ah iyo iyada oo loo marayo horumarin qaabdhismeed oo dheeraad ah, sariirta dareeraha ayaa markaa noqonaysa xarun farsamayn oo ujeedo badan leh ee hawlaha isku dhafan ee qalajinta, granulating, daahan xalalka, iyo dhaymada budada. Alaabta kama dambaysta ah sida caadiga ah granul solute degdeg ah.
ZPW-25 Rotary lagu niinaaso jaraa'id kiniinka
ZPW Taxanaha Tablet Press waa design gaar ah Effrvescent Tablet, granule jaraa'id galay kiniin lagu niinaaso si toos ah. feedh nooca fur, ka dib markii loo demin&processing Gaarka ah, ilaalin kartaa Powder eekaan feedh ku ool ah.Waxay leedahay saamayn roon wax waa ku nafwaayay, socodka ka xun, fududahay in qoyaan, ay qaataan hab de-isaha gaar ah, si ballaaran loo adeegsado warshadaha farmashiyaha.
NJP 800 Kaabsulka Mashiinka Buuxinta
Mashiinka buuxinta kaabsulku waa dhaqaaq kala go'a iyo nooca saxanka daloolka buuxinaya si toos ah qalabka buuxinta kaabsulka. Waxay qabataa naqshadaynta hagaajinta oo la isku daray sifooyinka daawada Shiinaha iyo shuruudaha GMP, waxay leedahay sifooyinka farsamada isku dhafan, mugga yar, qaylada hoose, qiyaasta buuxinta saxda ah, hawlo badan, si xasilan u socda iwm. Waxay dhammayn kartaa dhaqdhaqaaqa soo socda isla waqti isku mid ah. : quudinta kaabsal, kala soocidda kaabsoosha, buuxinta budada, diidmada kaabsoosha, quful kaabsoosha, dheecaan kaabsal oo dhammaatay iyo nadiifinta moduleka iwm. Habka qaadista oo si sahlan loo nadiifin karo, waxay badbaadisaa kharashka iyo xoogga shaqaalaha shirkadda u baahan wax soo saarka mugga
Soosaarayaasha Mashiinnada Xirmooyinka Gel Jilicsan ee La Habeeyay ee Shiinaha | La jeexjeexay
HSR-180H / 200H / 250H / 300H taxane softgel wax soo saarka waa qalab wax soo saarka ballaaran iyo macaamiisha ku habboon shuruudaha awoodda kala duwan.Qalabka uu leeyahay qaab-dhismeedka is haysta, hawl fudud, dayactirka fudud, waxqabadka xasilloon, wax soo saarka sare iyo isticmaalka hoose. Waxay ku habboon tahay cuntada, daawooyinka, qurxinta, kubbadda rinjiga iyo warshadaha kiimikada.
xirxirida nabarrada iyo mashiinka cartooning
JDZ-260 mashiinka cartonning-xawaaraha sare ee nooca joogto ah-waa cusub oo loogu talagalay by shirkadda our, iyo kulmay Heerka GMP ah. Waxaa jira muuqaalada oolnimada sare, guryaha deggan iyo awoodda sare, iwm teknoolajiyada badan oo, ay ka mid yihiin laabanto automatic buugyarahan ee& gaarsiinta, sanduuqyada la xirrira iyo post riixaya unit, iwm kulmi Yurub& heerarka American. Iyada oo muuqaalka kore ee nadiifta ah iyo qaab-dhismeedka riixaya joogto ah post, waxaa habboon in la shaqeeyaan oo ay u ilaaliyaan. Iyada oo wareeg dibadda-loop 4-tusmaynta double-meeraha-wheel ee, sanduuqyada laga furi karo, iyo laba jeer waxaa jira qalabka pre-sameynta, sidaa daraadeed waxa ee ay hubisaa in sanduuqyada in gebi ahaanba la taageeri karo.In mashiinka this, / gacanta indhaha / korontada / pneumatic farsamo lagu daray in mid ka mid ah, iyo markii uu ku xiran mashiinada kale isku aadiyo, waxaa line a xirxirida dhamaystiran.
Warshada Makiinada Baakadaha Dareeraha Buuxinta Tooska ah - SINOPED
Mashiinka Xirmooyinka Buuxinta Dareeraha Tooska ahwaxaa ka mid ah bamka buuxinta dareeraha ah, samaynta bacaha, xidhida iyo daabacaadda taariikhdaxawaaraha baakadaha 30 ilaa 50 boorso/daqiiqoWaqtiga bixinta 25 maalmoodNambarka nooca 320, 420, 520, 620 iyo 720Ballaca bacda 15cm ilaa 35cm
SGGZ-8 2 Madaxda booskiisa Buuxinta Mashine Dhalo Liquid Oral, Buuxinta Birta caaga Ku marooji Cap iyo booskiisa Machine
* Taxane Tani ayaa booskiisa buuxin afka (roll) mashiinka inta badan loo isticmaalo dhalada 20/30/50/60 / 100ml galaas, buux biraha cap thread ee, add cap, ku furtay (roll);* Nidaamka Buuxinta mashiinka taxane Tani iyo ku furtay nidaamka (roll) waxaa incisively iyo nololi soo bixitaankii, buuxinta sare sax, go'in lahayn;* Booskiisa (roll) Qaab-dhismeedka waa struc patent shirkaddaSGGZ-8 Professional 2 Madaxda booskiisa Buuxinta Mashine Dhalo Oral Liquid, Buuxinta Birta caaga Ku marooji Cap iyo saarayaasha ayaa booskiisa Machine leh waxyaabaha la midka ah ee suuqa la barbar dhigo, waxa ay leedahay faa'iidooyin aad u fiican ka daran marka la eego qaab, tayada, muuqaalka, iwm, oo ku riyaaqo sumcad wanaagsan in market.Sinoped ku soo koobayaa ka cilladaha ee alaabta la soo dhaafay, oo si joogto ah iyaga hagaajinaysaa. The qaaska ah ee Professional SGGZ-8 2 Madaxda booskiisa Buuxinta Mashine Dhalo Liquid Oral, Birta caaga Ku marooji Cap Buuxinta iyo soo saarayaasha ayaa booskiisa Machine laga beddeli karaa sida ay baahidaada.qormayaan, ayaa booskiisa (roll) siman tayo leh loo hubiyo tayada baakada.
Kartoo Nadiifi Room 1 saarayaasha From Shiinaha
Tani waa dhismaha qol nadiif ah adeeg buuxa hoos codsi GMP. Mashruuca macasha. A Cleanroom ama qol nadiif ah waa deegaan, sida caadiga ah loo isticmaalo ee soo saarta ama cilmi baadhis, in uu leeyahay heer hooseeyo ee sunta deegaanka sida boodh, microbes hawada, Qurub buufis iyo uumi kiimikada. More si sax ah, cleanroom uu leeyahay heer ay gacanta of contaimination la cayimay tirada Qurub halkii mitir cubic at size a walxaha khaaska ah. Si loo siiyo aragti, baxsan hawada daarmayaay'e jawi caadi ah magaalooyinka ku jira 35.000.000 qayb halkii mitir cubic in 0.5um kala duwan size iyo weyn dhexroor, oo u dhiganta cleanroom ISO9 ah, halka cleanroom ISO1 ah oo u ogolaanaya ma Qurub kala duwan size iyo 12 kaliya Qurub halkii mitir cubic of 0.3um oo yar yar
Sanadihii la soo dhaafay, waxaana ka yeelay guulaha weyn ay sabab u tahay credit noo wanaagsan iyo adeeg. Waxaan ku adkeeyey muddada dheer xiriirka ganacsi macaamiisha badan iyo qaar ka mid ah macaamiisheena dibada na u doortay inuu ahaado ay hay'adda iibsiga wax soo saarka dawooyinka& shirkadaha dawooyinka soo saarta ee Shiinaha. Our alaabta wax soo saarka dawooyinka yihiin dhoofiyo meelo badan oo dalalka, sida Korea, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, Vietnam, Iran, Japan, Denmark, Romania, Bulgaria, Russia, South Africa, Nigeria, USA, Australia, Canada, Argentina iyo Chile. mishiinada iyo qalabka sokow, waxaan sidoo kale siin khadadka-soo-saarka, soo jeedin mashruuc oo muhiim ah oo cilmi.
Warshada Kaabsoosha ee Mashruuca Turnket ee Cambodia
Mashruuca Turnkey ee Kaabsulka iyo Kiniinka, oo ay ku jiraan Qol Nadiif ah, Daaweynta Biyaha iyo Korontadawaxaanu samaynay 2020 waxaanu dhamaynay 2021SINOPED waxay bixisaa Nakhshad, Qalabka Qalabka (cadaadiska kiniiniga, buuxinta kaabsulka, baakad finan ah, isku darka, Saliida sariirta dareeraha ah, daaweynta biyaha, Qol Nadiif ah iwm) sidoo kale rakibidaHadda warshadda ayaa si caadi ah wax u soo saartaku soo dhawoow booqashada!
Machine Buuxinta kaabsol in Vietnam
Qalabka loo isticmaali karaa in xabagta iyo shaabaddii adag kaabsoosha dareere, walxaha iyo budada, iwm ka buuxsamay, oo sidaas daraaddeed waxyaabaha had iyo jeer la shaabadeeyey karaa in habka of baakooyinka, kaydinta iyo transportation.It wax ku ool ah looga hortagi karaa volatilization ee volatiledrugs, kordhinta nolosha shelf ee daroogada, si loo hagaajiyo xasiloonida ee kaabsoosha iyo daroogada safety.At waqti isku mid ah, waa xaqiijinta tayada alaabooyinka-dhamaadka sare ee shirkadaha dawooyinka iyo shirkadaha alaabta caafimaadka alsothe.
Khadka wax soo saarka kiniinka cuntada ee EU
Kani waa qol nadiif ah oo adeeg buuxa ah oo hoos yimaada codsiga GMP. Mashruuca Turkiga.Qolka Nadiifinta ama qolka nadiifka ah waa deegaan, sida caadiga ah loo isticmaalo wax soo saarka ama cilmi baarista sayniska, kaas oo leh heer hoose ee wasakhowga deegaanka sida boodhka, microbes-ka hawada ka dhasha, qaybaha hawada hawada iyo uumiga kiimikada. Si aad u saxan, qolka nadiifka ahi wuxuu leeyahay heer wasakhaysan oo la kantaroolay taasoo lagu qeexay tirada qaybaha mitir kuyuubik ee cabbirka qayb cayiman. Si loo bixiyo aragtida, hawada jawiga ee ka baxsan deegaanka caadiga ah ee magaalooyinka waxaa ku jira 35,000,000 qaybood halkii mitir kuyuubik ee cabbirka cabbirka 0.5um iyo ka weyn ee dhexroorka, oo u dhiganta qolka nadiifka ah ee ISO9, halka ISO1 qolka nadiifka ah uu u oggolaanayo wax qayb ah oo ku jira cabbirkaas oo kaliya 12 qaybood halkii mitir kuyuubik oo ah 0.3um iyo ka yar.
Faa'iidada of technology Eeboo FL Fasalka siyaasadeedka UDHIS ayaa Sugar Production Line Cuntada la dayactirka evenness oo xoogeystay of tayada wax soo saarka, kuwaas oo ay ka tarjumaysaa dheelitirka fiican u dhexeeya oolnimada-soo-saarka iyo tayada wax soo saarka. In geeddi-socodka of fluidization, qalabka socota illalintanada kor hawada, iyadoo dusha xiriir buuxa la hawada kulul, iyo qalabka Haddaba waa siman eated iyo gaadho gobolka horyaal ah sarrifka kulaylka sidaas u leedahay oolnimada sare. Configurated nidaamka ku xereen habboon iyo iyada oo loo marayo horumarinta dhismaha dheeraad ah, sariirta dheecaan ka dibna uu noqdo xarunta processing multi-ujeeddo in hawlaha wadajirka ah ee lagu qalajiyo, granulating, daahan xal, iyo budada wax soo saarka dressing.Final granule solute inta badan dagdag ah.
Pharma mishiino saaraha -Sino Pharmaceutical Qalabka Horumarinta (sinoped) Co, Ltd
Sino Pharmaceutical Qalabka Horumarinta (sinoped) Co, Ltd. waa shirkad wax soo saarka oo baaxad weyn oo ku takhasusay R&D, wax soo saarka, iibka iyo adeegga mashiinada wax soo saarka dawooyinka, ugu xirfadeedPharma mishiino saaraha in China, Waa noocyo kala duwan oo centrifuges, accessories centrifuge kala duwan, centrifuges tube, iyo centrifuges disk. A shirkad wax soo saarka dawooyinka ku takhasustay soo saarka iyo processing alaabta sida centrifuges saddex lugood. Shirkadda ayaa injineerada badan oo ka tirsan iyo farsamo xirfadeed, iyo waxay leedahay nidaam maamul oo tayo leh oo dhamaystiran iyo sayniska. Qalabka macmalay la kulmay heerarka qaranka iyo warshadaha. Waxaa ku qalabeysan yahay adeeg xirfadeed ka dib-iibinta, complete rakibidda alaabta iyo debugging, iyo tababar farsamo si ay u siiyaan dadka isticmaala qalabka xirfadeed iyo adeegyada xirfadeed.
Aad ula xiriiri lahayd US
Just ka tago aad email ama taleefan lambarka foomka xiriir si aan kuu soo diri kartaa quote ah free for our kala duwan naqshado!
Kala xidhiidh Iibka XXXXX